Kutenga kubva pawiricheya zvinotyisa
'Kutenga kubva pawiricheya zvinotyisa'
Posted on December 17, 2015 November 20, 2020 by csr 1687
Makambani anotengesa anoda kuita zvakawanda kuti zvitoro zvavo zviwedzere wiricheya inowanikwa. Kunyanya kugadzirwa kwechigadzirwa mumatanho.
Kutenga muzvitoro kunonetsa zvakakwana panguva dzezororo. Mafisitori akazara uye vatengi vasingashiviriri vanogona kunetsa. Nguva yezororo iri kunetsawo kana iyo zvitoro hazvikuchengete iwe mupfungwa. Zvinetso zve wiricheya vashandisi kutenga muchitoro kunogona kunge kuri kushomeka. Hupamhi hwemamwe matenduru hunogona kuita kuti zviomere vashandisi ku maneja kuburikidza. Kuisa zvinhu zvakajairika zvakanyanya pasherufu ndeimwe nyaya inosangana nevashandisi.
“Kune mimhanzi uye mwenje inofamba uye vanhu vazhinji uye zvakangooma maneja kwese kupi, "akadaro Carol Kaufman-Scarborough, purofesa wezvekushambadzira paRutgers Chikoro cheBusiness-Camden. Ese akasiyana aya akasanganiswa anoita kuti zviomere chero munhu.
Kaufman-Scarborough akaongorora vatengi vakaremara kubvira 1995. Akawana kutsvaga kwakawanda kwevatengi kwakundikana kufunga nezvevatengi kufamba nyaya - dzakaita sedzekutenga pawiricheya - pamwe nevanhu vane hurema hwekunzwa, kuona nekuziva.
Kaufman-Scarborough akati, "Mazhinji ematambudziko anotarisana nevatengi aya haatarisirwe. Chitoro dhizaini sarudzo inogona kuita senge yakanaka tsika, asi muchokwadi, kune matambudziko neaisle upamhi uye kuratidza kureba. Kuwandisa kunoderedza kupinda, kugarika uye kufamba."
Muenzaniso, Kaufman-Scarborough akati, “zvitoro zvakaita saHollister zvine sarudzo muzvigadzirwa zvayo. Kuwedzera vheranda nematanho kumberi kwechitoro kunofanira kunge kuri dambudziko riri pachena. ”
Ona zvimwe pa: http://greertoday.com/greer-sc/shopping-from-a-wheelchair-is-a-nightmare/2015/12/17/#sthash.MfuqZIOs.dpuf
Karman Wiricheya paNBC TV SHOW: Superstore